कसरी च्यापिन्छ ढाडको नशा? ५ कारण र समाधानका ८ उपाय | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य कसरी च्यापिन्छ ढाडको नशा? ५ कारण र समाधानका ८ उपाय
२०७४, १३ माघ शनिबार १०:४८
२. चोटपटकः लडेर वा खेलकुदका क्रममा शरीरको सन्तलन बिग्रिई ढाडमा चोटपटक लाग्दा वा सड्किँदा पनि नशा च्यापिन सक्छ। केटाकाटी वा खेलाडीलाई यो समस्या बढी आउँछ। चोटपटकका कारणले ‘डिस्क प्रोल्याप्स’ हुँदा ढाड अत्याधिक दुख्छ। फुटबल, क्रिकेट खेलाडीहरु घाइते भएर बस्ने गरेका अधिकांश घटनामा मेरुदण्डको नशा च्यापिएको हुने गर्छ।
विभिन्न रोगका कारण मेरुदण्डको नशा च्याप्पिएको भएमा रोग विशेष उपचारमा जानुपर्छ। तर, स्वास्थ्य अवस्था ठिक हुँदाहुँदै पनि नशा च्याप्पिएको छ र कारण पत्ता लाग्न सकेन भने विशेष उपचारमा विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो भएमा सुरुमा सामान्य नशाको औषधिको प्रयोग गर्ने र ६ हप्तासम्म फिजियोथेरापी गरेर हेर्ने।त्यसबाट पनि कुनै सुधार आउन सकेन भने शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ। शल्याक्रिया तीन किसिमबाट गरिन्छः
Previous articleतातोपानी कुण्डमा बिरामीको भिड, एकहप्तामा ६ सय जनाले स्नान गरे
Next articleभारतीय दुतावासबाट म्याग्दीमा दुईवटा एम्बुलेन्स सहयोग